Mwari vangataura zvinhu zvichaitika. Zvinhu izvi zvinototi zviitike. Hazvina basa kuti wazvigamuchira here kana kuti kwete. Ndizvo zvatinovona pana Simoni Pita. Jesu vakataura kwaari. Mashoko avo tinoaverenga muna Matiyo 26 ndima 34. Vakati, "Chirega ndikuudze chokwadi. Uchandiramba manheru ano. Uchandiramba katatu kose. Jongwe risati rarira".Pita haana kugamuchira mashoko aya. Tinoverenga davidzo yake muna Matiyo 26 ndima 35. Akati, "Kwete. Ndingatofa zvangu nemi. Asi hazvigoni kuti ndikutizeyi".
Maria akagamuchira mashoko aya. Zvaakanga ataurirwa zvikazoitika. Akazozvara Ishe Jesu Kristu. Izvi ndizvo zvatinovona muna Ruka 1 ndima 35 kusvika 38. Ruka 1 ndima 45 inoti, "Wakaropafadzwa iwe mukadzi iwe. Nokuti wakagamuchira mashoko aShe. Nokuti mashoko aya achaitika".Saka Mweya Mutsvene vangataura mashoko kwauri. Mashoko aya angava ekukuropafadza. Unofanira kugamuchira mashoko aya. Ndiko kuti aitike muhupenyu hwako. Asi izvi zvinosiyana nekunge Mwari vataura zvichaitika kunyika yako. Kana zvichaitika munguva yako. Kana zvauchasangana nazvo mukururama kwako. Zvinhu izvi zvinongoitika chete. Kunyangwe ukasazvigamuchira. Unenge wakangofanira kudzidza Shoko raMwari. Worinzwisisa. Wonzwisisa zvaunofanira kuita nemashoko aMweya aya. Ndiko kuti ugokunda maari.
(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu ndima
Rinonyorwa na ndima
Munoriwana pa ndima https ndima //bit.ly/rorlanguages
Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa ndima https ndima //bit.ly/shonachurch